Beddelka Burburka Xamuulka (LBS) Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Load Break Break Switch (LBS)
FZW32-24 Taxanaha Danab Sare ee Bannaanka oo Go'doomiya Kala-Bixinta Xakamaynta Vacuum
1. Sharaxaad FZW32-24 nooca banaanka danab sare go'doomin buufinta faakiyuumka waa nooc cusub oo xamuul beddelasho kaas oo ah is-dhexgalka khibradda qaangaarka ee isbadalka culeyska jira ee jira iyo naqshadeynta teknolojiyada sare ee dibedda. Qalabkan kala beddelashada culeyska wuxuu ka kooban yahay kala-gooye, kala-goyn faaruq ah iyo farsamo hawlgal iyo qaybo kale. Adoo adeegsanaya mabda'a faaruqiyaha faakuumka, oo leh awood qabasho xoog leh, waxqabad la isku halleyn karo, nolol adeeg dheer, mug yar, aan lahayn qatar qarax, ...
FZW32-40.5 (RD) Taxanaha Bannaanka Sare ee Is-beddelka Xakamaynta Vacuum
FZW32-40.5 banaanka sare ee korantada AC furida wiishka kala goynta alaabta waa shey cusub oo korsanaya khibrada wax soosaarka bur burka badeecada gudaha jirta iyo tikniyoolajiyad sare oo dibadeed si loo naqshadeeyo iyo nin ufact ire. biiro jebinta xamuulka waxay ka kooban tahay daab kala-goynta, kala-goynta faakiyuumka iyo aaladda hawlgalka. bakhtiiye bakhtiiye bakhtiiye, waxaa jira mudnaansho sida awoodda bakhtiinta bakhtiiye xoog leh, waxqabad lagu kalsoonaan karo, cimri dherer, mug yar, oo aan lahayn wax qarxa iyo wasakhda laga niyo qabo
PGS Taxanaha Bannaanka Sare ee SF6 Load Break Break
Qalabka PGS-630A ee kuxiran badeecada kala goynta waxaa loo isticmaalaa jebinta danab lagu qiimeeyay 12/24 / 40.5kV, oo lagu qiimeeyay 630A, 50 / 60Hz nidaamka awood qeybinta, xiritaanka culeyska hadda jira iyo kan ka badan nidaamka korantada, wuxuu si otomaatig ah u kala sooci karaa qeybaha kala awood qaybinta cilladaha dhaca. Beddelka waxaa lagu dhejiyaa koontaroolka elektarooniga ah kaas oo la socda tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay. Beddelku wuxuu leeyahay buug, mootooyin, habab hawlgal fog. Xakamaynta elektiroonigga ayaa lagu rakibayaa gudaha qashinka ...
FZW32-12 Taxanaha Bannaanka Sare ee Danab Kala Goynta Vacuum Load Break Break
1. Dulucda FZW32-12 nooca danab sare ee banaanka ka goynta furitaanka wiishka fasaxa waa nooc cusub oo xamuul beddelasho ah kaas oo ah is-dhexgalka khibradda qaangaarka ee is-beddelka culeyska guryaha ee jira iyo naqshadeynta teknolojiyada sare ee dibedda. Qalabkan kala beddelashada culeyska wuxuu ka kooban yahay kala-gooye, kala-goyn faaruq ah iyo farsamo hawlgal iyo qaybo kale. Adoo adeegsanaya mabda'a faaruqinta faakuumka, oo leh awood qabasho xoog leh, waxqabad la isku halleyn karo, cimri dherer adeeg, mug yar, qarax la'aan ...
FZRN21-40.5 Iskuduwaha Burburka Hawada Sare ee Gudaha
Xaaladaha deegaanka 1. Dhererka: 1000m; 2. Heerkulka heerkulka: -40 ~ + 40 ℃; 3. Qoyaanka qaraabada: celcelis ahaan maalin kasta 95%, celcelis ahaan bishiiba 90%; 4. Xoog dhulgariir: 8 darajo; 5. Fasalka Wasakhda: Darajada II. Xuduudaha farsamada MAYA. Waxyaabaha Qaybta Qiimaha 1 Qiyaasta la qiimeeyay ee KV 40.5 2 Rugta la qiimeeyay ee Hz 50 3 Fiisadda ugu badan ee la qiimeeyay ee fiyuuska A 63 4 1min inta jeer ee korantada u adkeysata danab kV 95/110 5 Hillaac hillaac ah oo iska caabisa danab kV 185/215 6 Heerka ugu sarreeya ee la qiimeeyo ayaa hadda iska leh kA 50 7 .. .
FZN25-12 Taxanaha Wareegga Xakamaynta Xakamaynta Vacuum Gudaha
FZN25-12 gudaha HV faakiyuumka kala goynta culeyska qalabka 3-waji AC 50Hz 12kV qalabka badalashada gudaha .. mechanism Habka hawlgalka: Habka hawlgalka guga, nooca gacanta iyo nooca korantada ee la heli karo; Type Nooca hawlgalka: operatiga midig ee hawlgalka bidix; Direction Jihada hawlgalka: hawlgalka bidix, hawlgalka midig; ♦ Codsi: shidan 12kv gudaha. Xaaladaha Deegaanka temperature Heerkulka heerkulka: -25 ° C 〜 + 40 ° C; Dhererka: <1000m (ka sarreeya heerka badda); Hum Qoyaan qaraabo ah: celcelis ahaan maalin kasta <95%, bil kasta av ...
FN12-12 Taxanaha Wareegga Sare ee Iskuduwaha Hawada
FN12-12 gudaha HV biiro furka hawada waa 3-waji AC 50Hz 12kV qalabka badalashada gudaha. Way Habka loo rakibo: xagga hore loo rakibay, dhinacna loo rogay, sibiil loo rogay; Mechanism Farsamaynta hawlgalka: Habka hawlgalka guga, nooca gacanta iyo nooca korantada ee la heli karo; Type Nooca hawlgalka: hawlgalka midig iyo bidix; ♦ Codsi: shidan 12kv gudaha. Xaaladaha Deegaanka temperature Heerkulka heerkulka: -25 ° C 〜 + 40 ° C; Dhererka: <1000m (ka sarreeya heerka badda); Hum Qoyaan qaraabo: celcelis maalinle ah <95%, monthl ...
FN7-12 Taxanaha Wareegga Sare ee Iskuduwaha Qalabka Isgoyska
FN7-12 waa nooc cusub oo ka mid ah hawo-ku-wareegga xarkaha culeyska korantada sare. Waxay ku habboon tahay AC 50Hz, danab lagu qiimeeyay 12kV nidaamka saddexda waji ee AC, maaddaama hadda uu jaban yahay xawaaraha iyo xiritaanka wareegga gaagaaban. Nooca Faahfaahinta Xaaladaha Shaqada temperature Heerkulka heerkulka: -25 ° C ~ 40 ° C; Dhererka: <1000m; Hum Qoyaan qaraabo ah: celcelis maalinle ah <95%; Celcelis ahaan bishii <90%; ● Ma jiri doono wax baabi'in, gubasho iyo gaaska qarxa ama uumiga goobta; ● Ma gariirto rabshad joogto ah. Technica ...
FN5-12 Taxanaha Wareegga Sare ee Iskuduwaha Hawada
Nooca FN5-12 nooca gudaha ah ee wiishka culeyska qalabka korontada ku shaqeeya (Hada kadib oo loo yaqaan 'break break break)' tufaaxyada shabakada AC 50Hz 12kV, si loo jabiyo culeyska hadda jira iyo xiritaanka wareegga gaaban. Badeecada biririfta xamuulka oo leh fiyuus ayaa gooyn kara mashiinka gaaban ee gaagaaban si loo ilaaliyo bedelka. Beddelka xaddiga culeyska waxaa loo isticmaali karaa nooca CS6-1 ee farsamada gacanta lagu qaato, badeecadani waxay si gaar ah u adeegsaneysaa farsamada gacanta ee gacanta lagu qaato. Codsiga FN5-12 nooca gudaha AC-ka korantada wiishka sare ee wiishka (Kadib ...